Afrika : Mpitoraka Blaogy Sary, Blaogy, Sary mihetsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2008 20:52 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, македонски, Português, Deutsch, 日本語, Shqip, English
Topazana maso i Afrika amin'ny alalan'ny sary mihetsiky ny gazetin'olontsotra. Hatramin'ny tompon-daka BoB, mpilaza tantara, mpanao sary mihetsika fanadihadiana momba ny mpanakanto, ny indostria mpanao sary mihetsika Nollywood any Nigeria sy ny maro hafa koa.
Mahaliana sy vita tsara ny tantara an-tsarin'i Usnico : ny sary iray milaza ny manjo , ny iray hafa kosa ny lohateniny milaza tsara ny momba azy : Mamela fahoriana be an'i Tshady ny ady. Ao amin'ny LookingGlassLand, misy karazana sarimihetsika hafa notsongaina tamin'ny tahirin'ny sarimihetsika aterineto, isan'izany ny mpilaza tantara kameroniana any Yaounde [FR], [EN], ary ny mpaka sary italiana Carla Cinelli mitantara ny fakany sary vehivavy tany Burkina Faso [IT].
VCDs Nizeriana hita ao amin'ny kwakoe-n'i Paul Keller.
Miroborobo ny indostria fanaovana sary mihetsika amin'ny tany afrikana maro. Ohatra ny any Nollywood, ilay indostria Nizeriana mpanao sary mihetsika. Manolotra ity sary mihetsiky ny fivorian'ny Mpanao sary mihetsika Nizeriana ity i Kulture Klash International, ary miady hevitra momba ny hizarana ny sary mihetsika Nollywood any Etazonia. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'i Nollywood sy ny sary mihetsika ianao, dia manana fanadihadiana an-tsary tamin'ny taona 2005 i journeymanpicture, ahitana ny fomba fanaovana sary mihetsika amin'ny fomba mirary sy hafa kely.
Rippleat ao amin'ny YouTube nampakatra ny sary mihetsika fanadihadiana momba ny mpanakanto Issa Nyaphaga avy any Cameroon. Ity oronantsary notontosain'i Chris Hill dia mamela an'ilay mpanakanto milaza ny fomba nianarany nandoko ny fomba tradisionaly tany ambanivohitra, ny nahatongavany ho mpanao sary “cartoon” politika ary ny nanenjehana azy satria tsy niraharaha fanampenam-bava ary nahitany fialofana tany Frantsa, nanaovany kabary teo anoloan'ny parliamenta frantsay tamin'ny fankalazana ny faha dimampolo taonan'ny fifanarahana tany Geneva raha nisolo tena ny mpialokaloka izy.
Nosoratan'i Juliana Rincón Parra
6 andro izayEspaina